SISFM: mbola tazana ny fahantrana amin’ny fitaovana | NewsMada
SISFM: mbola tazana ny fahantrana amin’ny fitaovana
Par Taratra sur 30/07/2020
Nandritra ny fitsidihana ifotony ataon’ny SISFM eny amin’ny CSB sy ny tobim-pahasalamana maro, mbola hita taratra ny fahantrana fitaovana eo amin’ny mpiasan’ny fahasalamana.
Tazana eny amin’ny toeram-pitsaboana Covid-19 rehetra ny fanasana ny EPI, tokony hariana avy hatrany ary misolo vaovao rehefa avy anaovana fa tsy kafiriana sasana izany. Tsy maintsy manao izany anefa ny mpiasan’ny fahasalamana satria tsy ampy ny eo an-tanana ho fiarovantena amin’ity aretina ity.
Ampiasaina avo roa na telo heny ny fe-potoam-piasan’ireny fitaovam-piarovana ireny izay tena mamoafady satria efa tsy miaro intsony izy amin’izay. Tsy misy ihany koa ny dinika teknika miaraka amin’ireo mpisehatra ka mampifangaro zavatra ary lasa manakorontana aza (vola fandrisika).
Tsy mbola misy resaka hatramin’izao ny “indemnité de risque” ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana ary iniana tsy resahina mihitsy izany amin’ity ady amin’ny Covid-19 ity.
Misavoritaka ihany koa ny resaka fandraisana mpiasam-panjakana. Mahazo vahana kokoa ny tetikasa Fafi fa tsy tazana ny zon’ireo Ifirp efa nivoaka hatramin’ny taona 2016.
Nisy ny fivoriana nataon’ny filohan’ny SISFM niaraka amin’ireo paramedy tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Fantatra tamin’izany fa tsy mivaona amin’ny fepetra fototra notakina hatramin’izay ny lalana hizorana ary ny fiaraha-mientan’ny rehetra eo ambany fitarihan’ny rafitra napetraka no antoky ny fahombiazana.